03-22-2012 11:56 PM #61
aps;vjoufom a[kokwvjydk&. E,fanrawgvj vnfnyd;om;nzpf. Tjvdkyg/ [j[j. Tdkiftrfvlvnf/ armif;edkifygbl;/ a,mufa,mufej hrzifa,mfudk wvsnfupd armif;cdkif;rvm;vdk htmuhxkwfaewm
trzifa,mfuvnf; uav;awgyifyef;w,fat av,mofejuyj ogm;pdkuwjh/ pdwfcs/ vmr,fmumr,f arqmfae
ဒါဆို ကားကြုံဘယ်လိုက်လို့ရတော့မလဲ > လေယာဉ်ကြုံရောလိုက်လို့ရမလား :d:d
ရထားရှိလားတော့မသိဘူး။ ရှိရင်တော့ ဈေးမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ မိုက်တယ်ဗျ။ လမ်းတစ်လျှောက်ရှု့ခင်းတွေ ကြည့်လို့ရတာပေါ့။
Grace, khit, mgmgthan, RunAtServer, THARGYII
03-23-2012 02:51 PM #62
uRefrwdk hu[kdw,fvfrSmrwnf;ygbl;/ self catering vdkUac:wJh apartment awGrSmwnf;rSmyg/ b,fae&mu aumif;w,fqdkwmudk udkacwftm;&ifaNymNyay;yg/ 'Duae udk,fMudKufwwfwJh tpm;taomufawGvJ,loGm;rSmyg/ a&awmifAkH;vdkufwifoGm;&ifwifoGm;rSm/ tJrSm aps;MuD;w,fqdkvdk h/
ရေတောင်ပုံးလိုက်တင်လာအုံးမယ် ဆိုပါလား။ ဒီလိုဧည့်သည်မျိုးကတော့ မိုက်တယ်ဟေ့။ နွေလာခဲ့။ လမ်းမှာ တည်းခိုခန်းမတည်းနဲ.။ တဲနဲ့ စလီးပင်းဘက်ခ် ၀ယ်ခဲ့။ ကန်ပ်ိန်းတွေမှာတည်း။ ရေရေလည်လည်မိုက်တာ။ မိုးများရွာရင် တဲပေါ်မိုးတဖြောက်ဖြောက်နဲ. ရွာကို သတိယသွားမယ်။ ကျနော်မနှစ်က ဆွီဒင် ကန်.မှာ သွားနှပ်တာ ကားတစီးလုံးမှ တနေ. ပေါင်၂၈ ပေါင်လောက်ပဲကုန်မယ်။ ချက်ပြုတ်လျော်ဖွတ်ဖို.ကန်ပိန်းမှာ အသင့်လုပ်ထားတယ်။ နော်ဝေထဲရောက်ရင် ဘယ်မှ တည်းစရာ မလိုဘူး ။ အောက် ပိုင်းမြို. တလျေက် မောင်ခေတ် ဘော်ဒါတွေကြည့်။ ကျနော်က အလယ်ပိုင်းက Trondheim မှာနေတယ်။ အော်စလို ဆင်းကြိုမယ်။ နေစရာထိုင်စရာစီစဉ်ပေးမယ်။ မောင်ခေတ်ဘော်ဒါတွေက လာမတည်း၊ လာမစားရင် စိတ်တောင်ဆိုးသေး။ လာခဲ့။ ဒီမှာ အားလုံးလိုလိုက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ. သဘောကောင်းကြတယ်။ ယုံပါ။ မောင်ခေတ်လည်း နော်ဝေမှာ သူကြီး အသေးစားပါ။ ကျနော်က ၇လပိုင်း နောက်ဆုံးသုံးပါတ် အားတယ်နော်။
AnthonyM, Botazan, dotekhaowe, Grace, koshwemung, Ngwe Zinyaw, Ni Maung, THARGYII
04-04-2012 05:59 PM #63
wdkuf&kduf&xm;awmh r&Sdbl;&Sifh/ b&mZD;vfuaewqifhoGm;&r,fwJh/ tr,fav;wqifhwqifharmygw,fat/
&xm;c ub,fuvm oufomvdrfhrvJ/ av,mOfxuf ydkaps;MuD;w,f/ 'gayr,fh y&kdrdk;&Sif;awGbmawGvkyfwmrsdK;? wa,mufxJorm;qdk last minute uae0,fwmrsdK;qdk&ifawmh tawmfoufomr,f/ uRefrwdkUvdk &xm;wGJawGeJ huav;tarawGtwGufuawmh odyfrvG,fbl;/
prefer tNzpfqkH;uawmh &xm;eJ hyg/ 'gayr,fh uRefruav;i,fao;awmh wwefwefoGm;&wJhc&D;qdkwmrNzpfekdifao;ygbl;/
av,mOfqdk&ifawmifav,mOfuGif;udkwcgum;pD;OD;[Jh/ csufuif0ifOD;[Jh/ [dka&mufawmh um;iSm;OD;[JheJ h&SkyfvSygw,f/ Nzpfedkifacst&SdqkH;u um;eJU oGm;wmygyJ/ 'gawmifvrf;rSm ESpfnavmuftdyf&rSmyg/ uRefrwdkMuawmh oGm;&wmMudKufygw,f/ ADZmudwfpawGvkyf&OD;rSmyg/
um;uawmh rqefUawmhbl;&Sifh/ uRefrrSm 'Da&mufuxJutNrJc&D;wlwloGm;wJh *Jvfz&efU&Sdao;w,f/ olvdkufrSm/ 'Dawmh pGyfzm;vdkrsdK; MudK;eJ hqGJac:&ifawmh &w,f/ 'gqdk tudkvJ tawGUtMuKHopf&wmaygh/cGd
qGpf&,f? qGD'if&,f? aemfa0&,fuaps;MuD;ygw,f/ 'Dawmh MudKwifNyifqifoGm;&rSm aps;MuD;w,fqdkwmygyJ/
'DeSpftwGufawmh c&D;&SnfeSpfckrxGufawmhyJ wckyJoGm;edkifawmhrSmyg wu,fvdk haemfa0oGm;Nzpf&ifaygh/
trSeftwdkif;aNym&&if aeUwdkif;'DykHpHcGufeJ hoGm;ae&wm NiD;aiGUvSw,f/ tem;,lcsifw,f wu,f. aNcwvSrf;udk 'kHygwfwcg&dkufcsifwJ h*Jz&efUudkvJ MudKa[mufxm;&r,f/ r[kwf&ifatmfatmfomidkcsifw,f/
Brussels ကိုပြောတာလား မဂရေ့စ်။ ကလေးက တော်တော်ငယ်သေးလား။ ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မိုင်၂ထောင်ကျော်လောက်ကို ရထားနဲ့ တဘရိတ်ထဲဒိုးတုန်းက အဲဒီရထားပေါ်မှာ ၇နှစ်၈နှစ်ကလေးတွေလည်း ပါတယ်ဗျ။ ထင်ထားသလိုလုံးဝမပင်ပန်းဘူး။ ရထားပေါ်မှာ တီဗီခန်း၊ ရှုခင်းကြည့်တဲ့ မှန်လုံးခန်း၊ ၂၄နာရီ ကော်ဖီ၊အအေး၊ကွတ်ကီ၊သစ်သီးတွေ ချပေးထားတဲ့ ဧည့်ခန်းတွဲလည်းရှိတယ်။ ရေချိုးခန်းလည်းပါတယ်။ လက်မှတ်ခကတော့ လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့သိပ်မကွာဘူး။ ယူရိုဘက်က ရထားတွေက ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
Alintan, Botazan, Grace, khit, Ngwe Zinyaw, Ni Maung, THARGYII
04-05-2012 10:59 AM #64
Thanked 28,849 Times in 1,265 Posts
trSwfw&NyefaNymNy&&if 2005?6 avmufuqdk&ifum;ay:ypfpnf;enf;enf;yg;yg;aumufwif pdwful;wnfh&m &GmawG avQmufoGm;Muw,f/ aeUawGnawG reufawGr&Sdbl;/ OD;wnfh&m uodyf&SdvSw,f r[kwfbl;/aNrykHvufaxmufNyD;avQmufoGm;cJhwm/
yifv,furf;aNca&muf&if a&xJqif;MunfhwmyJ/ enf;enf;yg;yg;at;vJ&w,f/ a&qif;upm;MuwmyJ/ awmifukef;Nrif&if wufMunfhw,f/ ckawmh tJ'DaeU&ufawGtwGuf aemifwawmhr&/ wcgwav udk,hfoli,fcsif;awG tcsif;csif;tm;ay;Muw,f/ 'DvdkekysdKwJhaeU&ufawG pdwful;wnfh&m oGm;MuwmawG MuD;vmNyD; aiGaMu;tqifaNyvmwdkif;vJ usef;rma&;raumif;awmh&if taNctaeray;awmh&if oGm;vdkU&wmrS r[kwfyJqdkNyD; /
tm;usygw,f/ ckxufxdwdkif vGwfvyfpGm oGm;edkifaomolrsm;udk.....
*a&Ypfa& tckthJvkdrSroGm;Ekdifawmhwm/ thJwkef;uoGm;cJhvkdYa&mufchJwmr[kwfvm;/ bmrS aemifw&aep&mrvkdbl;/ tckukd,fawGrSm uav;wGJavmif;eJY pdwfoGm;wkdif;ukd,fygawmhwmr[kwfbl;/ uav;eJY c&D;oGm;&wm awmfawmfpdwf&Snf&w,f/ [kdwpfacguf e,l;a,mufoGm;NyD;wnf;u awmfawmfpdwfukefoGm;w,f/ uav;uvrf;rSm zsm;ao;w,f/ ykdufqHvnf;ukefvkdufwm aomufaomufvJ/ vlBuD;BuD;yJqkd thJavmufrukefbl;/
,l&kyfbufukd wwfEkdif&if &xm;eJYyJoGm;csifw,f/ vrf;wpfavQmuf&Icif;av;awGBunfhNyD; at;aq;yJ/ um;uawmh awmfawmfyifyef;rSm/ aemufNyD; *a&Ypf ukd,fawmfav;u thJavmufBumBum um;ay:rSm NidrfNidrfxkdifcsifyghrvm;/ &xm;Buawmh aNcqefYvufqefYvkyfvJvkdY&w,f/
AnthonyM, Grace, Kaung Lay Luck, khit, Ni Maung, sunny007
04-19-2012 08:55 PM #65
uRefrtck&xm;eJUoGm;wmudkMunfhMunfhawmh tqifhqifhoGm;&wm/ 'geJU tudku b,fawmhavmufoGm;rSmvJ/ wu,fvdkUuRefrwdkUoGm;Nzpf&if Zlvdkif 'kwd,ywfavmufNzpfzdkUrsm;ygw,f (udkacwfu tJ'DtcsdefawGtm;NyDwJh/ trZifa,mfuvJ a[mvD;a'; xyf,lvdkU&NyDwJh)
ကျွန်တော်တော့ မသွားဖြစ်တော့ဘူးဗျ။ ပတ်တဂိုးနီးယားကို Fall မှာသွားရင် အရမ်းလှတယ်လို့ ပြန်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောလို့ အဲဒီဘက်ဘဲသွားတော့မယ်။ နောက်နှစ်သွားအုန်းမယ်ဆိုရင် ပြောပေါ့..အားရက်နဲ့ကိုက်ရင်အတူသွားလို့ရတာပေါ့ ။
Grace, khit, Ni Maung
05-28-2012 08:11 AM #66
aemfa0axmif? tvkyform; or*¾eJU oydwftaMumif;
tJh'geJY tjyefrSm qufyGm;rdMujyefa&m .. b,fEdkifiHudkBudKufvJwdkY .. oGm;cGifh&dS&if b,fEdkifudkoGm;rvJwdkYajymrdMuwJhtcg .. ig aemfa0;oGm;r,fvdkY .. bmaMumifhvJwJh .. ig aemfa0;u 'Drdkua&pD qdkwmudkBudKufw,fvdkY .. bmaMumifhBudKufw,fqdkwmvnf; quftxGefY&Snfrdjyefw,f ..
tJh'Drwdkifcifwkef;u usL;ypfrSmawmif aemfa0;u axmifqdkwm b,favmufaumif;wJhtaMumif;ajymrdMuao;w,f/
vl eJY pepf. . .. . . . . . .
aemfa0 axmifqkdvkd. ... [kdwpf&ufESpf&ufavmufu usaemfwkd.em;u&Jpcef;wpfck tcsKyfom;awGukd tdrfjyefvGwfvkdufMuw,f/ &JawG qE´jyaevkd.wJ./ &Jtukefawmh r[kwfygbl;/ yxrtqifh oydwftwGuf tcsdK.&JawGukd qE´jyzkd. or*¾u xkwfvkdufw,f/ tvkyform;oydwf tckaemfa0rSm paeygjyD/ &nf&G,fcsufawGuawmh tcsdK.tvkyfawGrSm rdef;r a,mufusm; vc wef;wlrjzpfwm? tpm;xkd; 0ef;xrf;eJ. tjrJwrf;0efxrf; vkyftm;crwlwm? tpkd;&0efxrf;eJ. jrLeDpyg,f 0efxrf; vc rwlwm tJwmawGukd wlnDwJ. vc ay;zkd. twGuf or*¾u awmif;qkdcJhw,f/ tpkd;&eJ. nSdEkdif;cJhw,f/ rajyvnfwJh twGufrSm yxr tqifhtaeeJ. &JtcsdK.? pm&if;ukdif? ausmif;q&mawGukd tvkyfua&S.rSm tvkyfrvkyfyJ qE´jyzkd. xkwfvkdufw,f/ tJ'Dawmh ckeu &Jpcef;rSm &JrvkHavmufawmh w&m;&ifqkdifaewJh tcsKyfom;awGukd ukd,fhaetdrfrSm jyefaeMuzkd. &Ju vGwfvkdufwmyg/ qE´jyyGJjyD;&if &Ju olwkd. tdrfawG pmykd.ygvdrfhr,f/ tJ'Dus&ifawmh olwkd. &Jpcef;ukd ukd,fhtpDtpOfeJ. jyefvmjyD; tcsKyfcef;xJ jyef0ifMu&rSmyg/ t&ifu usaemfwkd. jrefrmwa,muf t&ufaomuf qkdifu,fpD; trIeJ. axmif14 &ufusygw,f/ axmifu ae&m r&ao;vkd. apmifhtkH;qkdjyD; apmifhae&w,f/ aemuf ar;ao;w,f tvkyfub,f&ufawGtm;ovnf;wJ. tm;wJh&ufawGrSm axmifukd tydGKifhref.vkyfjyD; vmusEkdifw,fwJh/ rESpfuvnf; jrefrmwa,muf trImMuD; wpfckeJ. axmifav;ESpfusw,f/ olu6vaxmifxJaejyD;wJhtcg ol.oli,fjcif;awGu tjyifukd ac:vnfcGifh&Sdw,f/ nae b,ftcsdefta&mufjyefvmygqkd jyefvm&w,f/ vGwfvGwfvyfvyfyJ/ jyef0if&ifawmh 'Pf&m&Sdr&Sd? t&ufaopmaomufpm;xm;wm&Sdr&Sd axmiftPmykdifawGu ppfw,f/ trIu vGwfcgeD; wESpf tvkdqkd&if tdrfrSmjyefaevdk.&w,f/ 'gayod &kyf&SifawG xJuvkd. vSsyfppfajcygwfeJ./ e,fausmfwmeJ. a'goxGufwmeJ. &Ju csufjcif;a&mufvmjyD; ppfaq;w,fvkd. qkdw,f/
tvkyform; oydwftaMumif;jyefqufvkdufygtkH;r,f/ tJvkd yxr tqifh ajyvnfrI r&wJ. twGuf reufjzefu aepjyD; 'kwd, tqifh xyfwufygr,f/ 'kwd, tqifhrSmawmh usaemf armifacwfvnf; oydwfarSmuf&rSmyg/ usaemfwkd.vkd rlMudKvufaxmuf? vufaxmufausmif;q&m? trdIufum; tvkyform;? um;yguif 0efxrf; eJ. tcsdK.0efxrf;awG pjyD; 'kwd, tqifhukd arSmufMurSmyg/ wEkdifiHvkH;awmh r[kwfygbl;/ jrdK. 20 avmufu tvkyform;14700 avmufyg/ ausmif;awG? rlMudKawG oydwfaMumifydwfMuayrJh rdz awG&J. tvkyfawG rydwfMuwJh tcg rdzawGu tvkyfawGuaecGifh,lMu&r,f/ trIdufawG rodrf;wJh tcg jrdK.cHjynfolawG uarmufurjzpfr,f/ tpkd;&ukd ykda0zefr,f/ um;yguifawGu tvkyfrvkyfMuwJh tcg um;awG &yfjcifovkd &yfMuawmhr,f/ tJvkd tpkd;& ,Eå,m; ajymh[mvmatmif or*¾ u wqifhjyD; wqifh ol. tzGJ.0if tvkyform;awGukd xkwfokH;ygw,f/ vl aomif;eJ. csDjyD; qE´jywJh tvkyform;awG ykdufqHb,fu &rvnf; qkd&if usaemfwkd. tzGJ.0ifawG[m wvukd a':vm 50 avmuf or*¾ukd tzGJ.0ifjzpfwkdif; ay;&ygw,f/ tzGJ.0ifaygif; 3odef; avmuf &Sdygw,f/ wvukd or*¾0ifaiGu a':vm 15 oef;yg/ &wJh aiGawGukd a&eHukrPDawG tjcm;vkyfief;awGrSm jyeffvnf jrKwfESHxm;wJh twGuf or*¾[m awmfawmf csrf;om;ygw,f/ 'gaMumifh tJ'DaiGaMu;awGeJ. oydwfarSmuf tvkyform;awG&J. vc 70 &mckdifElef;ukd oydwfrvSefrjcif; or*¾u ay;ygr,f/ or*¾uay;wJh aiGukd awmh tcGefrjzwfygbl;/ (ykHrSeftm;jzifh wv 36 &mckdifElef;aqmif&ygw,f/ ) tcGefraqmif7awmh ykHrSefvcavmufygyJ/ oydwfoufwrf;Mumvmr,f qkd&ifawmh or*¾vnf; aiGaMu;t& qkH;&IH;rSm jzpfovkd? tpkd;&vnf; qkH;&IH;Mu&rSmyg/ 'DwyGJ b,fol wyfvSefrvnf; MunfhMu&tkH;rSmyg/ wESpfuawmh usaemfwkd. tekdif&cJhygw,f/
Last edited by khit; 05-28-2012 at 08:22 AM.
abbyy, Ares, asg, badinf, Botazan, Grace, happyvalley, HtatePyaung, Incubuz, julykoko2009, Kaung Lay Luck, Ko Khant, koshwemung, KoShweYoeLay, kotayza, LoveSuju, lpj, mahawgani, mgmgthan, NyoMar, pauksee, PiNyat, THARGYII, THIHA, wasabi
05-28-2012 11:44 AM #67
နှစ်ပေါင်းများ စွာ တခန်းတနားနဲ. အခန်းအနားတွေကို တက်ရောက်လေ့ရှိတဲ့ ဦးရွေမန်းရဲ. တခန်းတနားကျင်းပတဲ့ နော်ဝေ အမျိုးသားနေ.ရဲ. အခန်းအနားကို တက်ရောက်ခဲ့ တဲ့ ပုံပါ။
ထီးတော်မိုး၊ ပန်းတော်ဆက် တွေ တမြိုင်မြိုင်ဘ၀ကနေ. သူ.ထီးသူဆောင်း သူ.ခုံသူထိုင်ပြီး အခုလို .. ..
နော်ဝေ ဘုရင့်နန်းတော်ရှေ.မှာ ဘယ်လ်ဂျီယံ သံအမတ်နဲ. အတူ
ဦးရွေမန်းနဲ. ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ.ရဲ. ဓါတ်ပုံတွေ ...
အဲဒီနေ.က အမျိုးသားနေ. အခန်းအနားကြောင့် အင်္ဂလန်ကို ကူးဖို. အတွက် ဦးရွေမန်းတို. တည်းခိုရာ ဂရန်းဟိုတယ် အရှေ.မှာ လမ်းပေါ်မှာ လူပြည့်နေတာမို. ဟိုတယ်နောက်ပေါက်ကနေ ကားရပ်ရာ ခမ်လှမ်းလှမ်း အထိ ကိုယ့်အထုတ်ကိုယ်ဆွဲပြီး သွားခဲ့ရတယ်လို. သိရပါတယ်။
Botazan, Grace, julykoko2009, k-pooh, Kaung Lay Luck, lpj, mahawgani, mgmgthan, NyoMar, peace777, THARGYII, THIHA, tiptop, wasabi
05-31-2012 12:33 AM #68
ဆယ်ကျေုာ်သက် တွေ ထဲက အထူးသဖြင်. ဆယ်ကျော်သက် မိန်းခလေးတွေ မက်မက်မောမော စွဲလန်းတဲ့ ပေါ့ပ်စတား Justin Bieber တယောက် ဒီတပါတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ.က နော်ဝေ နိုင်ငံ အော်စလိုမြို.ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဆယ်ကျော်သက် မ်ိန်းခလေး တွေကတော့ “ ဘီဘာကို ချစ်တယ်” ဆိုတဲ့ ရှပ်အကျီတွေ ၀တ်ဆင်ရင်း Baby! Baby! Oh yeah! ဆိုတဲ့ ဂျပ်စတင်ရဲ. ကျော်ကြားတဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုပြီး မြို.လည်ကောင် တခုလုံးလမ်းသလားခဲ့လို. မြို.လည်ကောင် တ၀ိုက် လမ်းပိတ်ဆို.မှုတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်။ လူပေါင်း ၂သောင်းခွဲလောက် ကြည့်ရှုခဲ့ တဲ့ သူ.ရဲ. ကွန်.ဆက် ကိုတော့ စိတ်မသက်မသာနဲ. အားပေးနေတာကတော့ ဒီ ဆယ်ကျော်သက်တွေရဲ. မိဖတွေနဲ. အော်စလိုက ရဲ တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ပူနေတဲ့ ကြားက လူပေါင်း ၅၀ လောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီး အဲဒီအထဲက ၅ဦးကိုတော့ ဆေးရုံတင်ပို.ခဲ့ရပါတယ်။ ဘရောဗီကာ မှာရှိတဲ့ အော်ပရာ ဇတ်ရုံရဲ. အရှေ. အော်စလို ရေလက်ကြား ပေါ်မှာ ဘီဘာရဲ. ကွန်.ဆက် စင်မြင့်ကို တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး အဲဒီ အနားက လမ်းတွေက အော်စလိုရဲ. တကယ့် အချက်အခြာ ကျတဲ့ လမ်းတွေ ဖြစ်သမို. ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို.မှုတွေလည်း ဖြစ်ကုန်ရတာပါပဲ။ ဘီဘာရဲ. ကွန်ဆက်ကတော့ အခမဲ့ရှိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူ. တည်းခိုရာ ဟော်တည်အရှေ. မှာလည်း ဆယ်ကျော်သက် မ်ိန်းခလေးငယ်တွေ က သူ.ကို နူတ်ဆက်ဖို. စောင့်နေကြတယ်လို. သိရပါတယ်။
ကြက်ခြေနီအဖွဲ.ရဲ. အဆိုအရ လူပေါင်း (၇၈) ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုဖြစ်ခဲ့ပြီး (၁၄) ဦးကို ဆေးရုံပို.ဆောင်ခဲ့ရပါကြောင်း။
Photo source from tv2 Norway and the others media web side in Norway
Last edited by khit; 05-31-2012 at 01:29 AM. Reason: နောက်တိုးသတင်း
achitsone, Alley Cats, BH, Botazan, Grace, k-pooh, Kaung Lay Luck, LoveSuju, nakamura, NyoMar, THARGYII, wasabi
06-04-2012 08:01 PM #69
Originally Posted by khit
oydwfoufwrf;Mumvmr,f qkd&ifawmh or*¾vnf; aiGaMu;t& qkH;&IH;rSm jzpfovkd? tpkd;&vnf; qkH;&IH;Mu&rSmyg/ 'DwyGJ b,fol wyfvSefrvnf; MunfhMu&tkH;rSmyg/ wESpfuawmh usaemfwkd. tekdif&cJhygw,f/
(၁၂) ရက်မြောက်နေ. အလုပ်သမားသပိတ် အကြောင်း ဆက်ပြောခြင်ပါသေးတယ်။ ဒီကနေ. သပိတ်မှောက် အင်အား ၅၈၀၀၀ အထိ လုပ်ငန်းခွင်ကနေ ထွက်ပြီး သပိတ်မှောက်ဖို. နော်ဝေ အလုပ်သမား သမဂ္ဂက ညွန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို သပိတ်မှောက်ထဲ့ အထဲမှာ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်း (၁၈၀၀) ခန်. ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်း ထဲက (၁၉၉)ဦး ဟာ နော်ဝေ နိုင်ငံရဲ. အချက်အခြာကျဆုံး အော်စလို ဂါဒါမိုဝမ် လေဆိပ်က ဖြစ်သမို. မနေ.က စပြီး ခရီးသည်တွေဟာ လေဆိပ်ရဲ. အ၀င် လုံခြုံရေး ဂိတ် ဖြတ်ဖို.အတွက် (၅) နာရီခန်. စောင့်ဆိုင်းကြခဲ့ရပါတယ်။ တပြိုင်တည်းမှပဲ လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်း အင်အား မလောက်ဌမှုကြောင့် နော်ဝေ နိုင်ငံရဲ. လေဆိပ်တော်တော်များများကိုလည်း ပိတ်လိုက်ရပါတယ်။ လေကြောင်းလိုင်းများလည်း သူ.တို.ရဲ. လေယျဉ်ပျံသန်းမှု အစီအစဉ်တွေ ရွေ.ဆိုင်းလိုက်တာကြောင့် အခုဆိုရင် ခရီးသည် အတော်များများ ဟာ ခရီးသွားလာဖို. အတော့ကို ကသိကအောင့် ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ် အကုန်မှာတော့ အစိုးရ၀န်ထမ်းများကို နိုင်ငံတော်မှ လစာငွေ ၄.၁ ရာခိုင်နူန်းတိုးပေးဖို. ကမ်းလှမ်းခဲ့လို. အစိုးရ၀န်ထမ်းအချို. လုပ်ငန်းခွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ကြပေမဲ့ မြူနီစပါယ် အတွင်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို ၃.၉၆ ရာခိုင်နူန်းခန်.သာတိုးပေးဖို. မြူနီစပါယ် အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ခံတွေက ကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အတွက် အလုပ်သမား သမဂ္ဂက ငြင်းဆန် လိုက်ပါတယ်။ ဒီလို ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့ အပြင် သပိတ်အင်အားကို ထပ်မံတိုးမြင့်လိုက်တဲ့ အတွက် အခုလို နော်ဝေနိုင်ငံအတွင်း ကျောင်း၊ရုံး၊ လူအိုရုံ ကအစ ကားပါကင် ဌာန၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဌာနတွေမှာပါ အခက်အခဲတွေဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
တကယ်လို. မြူနီစပါယ် အုပ်ချုပ်ရေး က ဆက်လက်ငြင်းဆန်နေအုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ.မှာ သပိတ်မှောက် အင်အား (၆၅၀၀၀) အထိ တိုးမြင့်ဖို. သမဂ္ဂပြင်ဆင်နေပါပြီ။
လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများ သပိတ်မှောက်မှုကြောင့် မကြာခင် အော်စလို ဘူတာရုံကိုလည်း လုံခြုံရေး အခက်အခဲကြောင့် ယာယီပိတ်ထားဖို. အဏာပိုင်တွေ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြို.တော် အတွင်း စတိုးဆိုင်၊ နေအိမ် တွေက လုံခြုံရေး စနစ်တွေကိုလည်း ခြိမ်းခြောက်နေကြတဲ့ အတွက် ဒီ ဖြစ်စဉ်ဟာ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်အုံးမလည်း ဆိုတာက အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို. ကောင်းပါကြောင်း တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
BH, Botazan, Grace, Kaung Lay Luck, LoveSuju, mgmgthan, nakamura, pauksee, THARGYII, wasabi
06-05-2012 08:42 PM #70
ဒီ ဖြစ်စဉ်ဟာ ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်အုံးမလည်း ဆိုတာက အင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို. ကောင်းပါကြောင်း တင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်။
ဒီကနေ. (၁၃) ရက်မြောက် သပိတ်ရဲ. ည ၁၀ ခွဲအချိန်မှာ အလုပ်သမား သမ၈္ဂရဲ. တောင်းဆိုချက်တွေကို ကွန်မြူး (မြူနီစပါယ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ.က ) လိုက်လျောလိုက်ပါပြီ။ အလုပ်သမား တန်းတူအခွင့်အရေးတွေ ပေးဖို.နဲ. လုပ်ခ ၄.၀၇ ရာခိုင်နူန်း တိုးမြင့်ပေးဖို. သဘောတူလိုက်တဲ့ အတွက် အလုပ်သမား သပိတ်ကို ဒီညပဲရုတ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။
အလုပ်သမား သပိတ်အောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့
၂။ သမဂ္ဂရဲ. စုစည်းမှုအောက်မှာ တညီတညွတ်တည်းရှိမှု
၃။ သမဂ္ဂရဲ. ဓန အင်အား တောင့်တင်းမှု
BH, Botazan, exotic, Grace, Kaung Lay Luck, Ko Khant, LoveSuju, mgmgthan, nakamura, NyoMar, peacehorizon, sunny007, THARGYII